खैरो हिरोइनसहित दुईजना पक्राउ
जनकपुधराम । जनकपुरधामबाट खैरो हिरोइनसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बिहीबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-९ थापाचोकबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो । सप्तरी खडक नगरपालिका-८ खोजपुरका रजनी कुमारी चौ...
baahrakhari.com . ३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पटक-पटक बयान फेरेपछि राधिकाको मुद्दा तामेलीमा
जनकपुरधाम । सिन्धुली गोलान्चोर गाउँपालिका-२ की राधिका कार्कीको हत्या प्रयासका मुद्दा तामेलीमा गएको छ । राधिकाले आरोपितकाे बारेमा पटक–पटक बयान फेरेपछि मुद्दा तामेलीमा गएको हो । असार ५ गते जिल्ला प्...
baahrakhari.com . १८ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति यस्तो बन्यो (सूचीसहित)
काठमाडौंं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप)को केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएसँगै २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरेको हो ।
baahrakhari.com . २२ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
‘जसपा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको मात्र हो ?’
काठमाडौं । विवादकैबीच सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक असार २७ र २८ गतेका लागि आह्वान गरेको छ । वीरगञ्जमा बस्ने बैठकका एजेन्डा भने सार्वजनिक ...
baahrakhari.com . ३० मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कपिलवस्तुमा अवैध रूपमा भित्र्याइएका कुखुराको चल्ला नष्ट
चन्द्रौटा । इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरले अवैध एक हजार ८०० ब्रोइलर कुखुराको चल्ला नष्ट गरेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–१ मडहास्थित नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गएराति भारतबाट नेपालतर...
वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीले पाण्डेले डाके संसदीय दलको बैठक
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशको सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शनिबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्...
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन भएको डेढ महिना बितिसक्दासमेत झापाका दुई हजार ३४३ उमेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण अझै नबुझाएको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तह र जिल्ला सम...
माछापुच्छ्रे बैंककाे नयाँ शाखा धादिङको सिम्लेमा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले धादिङ सिम्लेमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिम्ले शाखा सञ्चालनमा आएसँगै देशभर माछापुच्छ्रे बैंकको शाखा १६५ वटा पुगेको साे बैंकले जनाएको छ । नयाँ शाखामा कर्जा, न...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको नगरसभाको ११औँ बैठकबाट आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । महानगरका मेयर...
काठमाडाैं । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छ भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा सहज रूपमा पाइने कटुससमेत आयात गरेर नेपालीले खाइरहेको पाइएको...
एनएमबि बैंक र टानबीच डिजिटल सेवामा प्राथमिकता दिने सम्झौता
काठमाडौं । एनएमबि बैंक र ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)बीच डिजिटल सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिन सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख व्यापार तथा रणनीति अधिकृत सुदेश उपाध्याय र टानको त...
बहराइनको राजदूतमा भण्डारी, मेक्सिकोमा खत्री
काठमाडौं । बहराइनका लागि नेपाली राजदूतमा तीर्थराज वाग्ले नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वाग्लेलाई राजदूत नियुक्त गरेकी हुन् । त्यसैगरी, अमेरिकाका लाग...
नयाँ कागतीको रिफ्रेसिङ स्वादमा स्प्राइट
काठमाडौँ । स्प्राइटले कागतीको रिफ्रेसिङ स्वादमा नयाँ स्प्राइट बजारमा ल्याएको छ । नयाँ स्वादको स्प्राइट लन्चको एक हिस्साको रूपमा कोका–कोला नेपालले नयाँ टेलिभिजन विज्ञापन लन्च गरेको छ । स्प्राइटको ब्...
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र युरोपा फिटनेस सेन्टरबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ललितपुरको ग्वार्काेमा रहेको युरोपा फिटनेस सेन्टर र बैंकबीच बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल...
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार शर्मा र गुरुङ बालुवाटारबाट पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार जरिबाना र कैद सजाय तोकिएका महोत्तरी घर भई ललितप...
नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । नबिल बैंकको असार १६ बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकको प्रमुख कार्यकारी...
काठमाडौं । इरानको दक्षिणपूर्वी प्रान्त सिस्तान र बलुचेस्तानमा भएको कार दुर्घटनामा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको सरकारी समाचार एजेन्सी इरानले शुक्रबार जनाएको छ । बिहीबार राति भएको दुर्घटनामा कोनारकद...
कतार विश्वकपमा ‘अर्ध–स्वचालित अफसाइड प्रविधि’को प्रयोग हुने
काठमाडौं । फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले कतार विश्वकप २०२२ मा ‘अर्ध–स्वचालित अफसाइड प्रविधि’ प्रयोग गर्ने भएको छ । फिफाले शुक्रबार ‘अर्ध–स्वचालित अफसाइड प्रविधि’बाट धेरै छिटो र विश्वसनीय निर्णय आउन...
प्रदेश १ सरकारका स्थायी संरचना बनाउन जग्गा प्राप्तिका लागि छलफल
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले स्थानीय तहसँग छलफल सुरु गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा ...
डीसीएद्वारा नेपालका लागि पाँच वर्षीय रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था डान चर्च एड (डीसीए)ले काठमाडौंमा १००औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत डीसीएले नेपालका लागि पाँच वर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ...
रवि लामिछानेको पार्टी आयोगमा दर्ता, चुनाव चिह्न गोलाकार भित्रको घण्टी
काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पार्टीको छोटकरी नाम रास्वपा रहेको छ । चुनाव चिह्न भने गोलाकारभित्रको घण्टी पाएको छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५० जना काेभिड–१९ संक्रमित थपिएका छन् । २ हजार ८१४ वटा नमुना परीक्षण गर्दा साे संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हाे । आज १८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । याेसँगै आजसम्...
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २८ जना काेभिड १९ संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा २६ र भक्तपुरमा दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हाे । याेसँगै आजसम्म उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितकाे स...
अब परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन : नेम्वाङ
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अब परिवर्तनका लागि नेपालमा आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमडौंमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स्थ...
क्यानडामा अभ्यासमा व्यस्त नेपाली क्रिकेट टोली (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । क्यानडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा जुटेको छ । गत मंगलबार क्यानडा प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीले क्यानडामा दुई एक दिवसीय र एक अभ्यास खेल खेल्ने छ । त्यसका लागि टो...
जुन महिनामा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अति...
कानुन विश्वविद्यालयका लागि सर्वोच्चले पहल गर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स...
‘कानुनी शासनका लागि गुणस्तरीय कानुनी शिक्षा आवश्यक’
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्...
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्च प्राथमिकतामाः मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे...
कानुन शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको आधार : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुनै कानुनी समस्या नहुने बताएकी छन् । शुक्रबार काठमडौंमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित का...
अब स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय
काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक (पहिलो शंसोधन) २०७९ र औषधि विधेयक (तेस्रो संशोधन) २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले यी दु...
अमेरिकन आइडल फाइनलिस्ट अर्थर गन ‘नेपाल टुर’मा आउँदै
काठमाडौं । नेपाली मूलका गायक तथा अमेरिकन आइडलका फाइनलिस्ट दिवेश पोखरेल (अर्थर गन) नेपाल टुरमा आउने भएका छन् । उनी ‘नेपाल टुर’का लागि नेपाल आउन लागेको सांगीतिक कार्यक्रम आयोजक ब्रेनसर्भिसका संस्थापक...
baahrakhari.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
रामायण सर्किटले नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत बन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भगवान् राम र सीतासँग जोडिएका धार्मिक स्थलहरूलाई स्थलमार्गबाट जोड्ने रामायण सर्किटले नेपाल–भारतको सम्बन्ध अझ मजबुत बन्ने विश्वा...
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्त...
यसरी निकाले नर्भिकका चिकित्सकले बिनाशल्यक्रिया पेटमा अड्किएको चम्चा (भिडियो कुराकानी)
काठमाडौं । यही असार १२ गते थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा जटिल समस्या लिएर आएकी एक किशोरीको सफतलापूर्वक उपचार गरियो । १२ गते आइतबार साँझ झन्डै पाँच बजेको समयमा १७ वर्षीया किशोरी पेटको समस...
काठमाडौंमा जगन्नाथ रथयात्रा (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । राजधानीको जगन्नाथ देवलबाट सुरु भएर सो स्थानमै सम्पन्न भएको जगन्नाथ रथयात्रामा हजारौँ भक्तजनको सहभागिता रहेको छ । इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण चेतना नेपाल (इस्कोन) ले यात्राको आयोजना गरेको...
सिकलसेल रोगको स्थायी समाधान गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तयारी
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकलसेल रोगको स्थायी समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सिकलसेल रोगको निवारणको ला...
पीसीओएस समस्यासँग जुध्दै श्रृति हसन, यसरी गर्दै छिन् सामना
मुम्बई । दक्षिण र हिन्दी चलचित्र उद्योगकी चर्चित अभिनेत्री श्रुति हसन एउटा रोग (बिमारी) सँग लडिरहेकी छिन् । अभिनेत्रीका अनुसार उनी पोलिसिस्टिक ओवरी सिन्ड्रोम (पीसीओएस) नामक बिमारीसँग लडिरहेकी हुन् ...